Tag: Waxqabadka | Martech Zone
Fikirka Naqshadeynta: Codsashada Rose, Bud, Hawlaha Qodaxda ee Suuqgeynta
Arbacada, December 12, 2018 Isniin, Disembar 17, 2018 Douglas Karr
Toddobaadkan wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan maadaama aan la shaqeynayay qaar ka mid ah la taliyayaasha shirkadaha ka socda Salesforce iyo shirkad kale si aan u arko sida aan u horumarin karo kal-fadhiyada istiraatiijiyadeed ee macaamiishooda. Farqiga weyn ee warshadeenna hadda waa in shirkaduhu inta badan leeyihiin miisaaniyadda iyo ilaha, mararka qaarkood ay leeyihiin qalab, laakiin inta badan ma laha istiraatiijiyad ay ku bilaabaan qorshe fulineed oo ku habboon. Hal codsi oo ay ku qaadaan wadada macaamiil kasta
Warbixinta Bulshada Gudaha Google Analytics
Khamiis, Juun 14, 2012 Arbacada, Juun 13, 2012 Jenn Lisak Golding
Ka dib helitaanka Google ee PostRank, warbixinta bulshada ayaa lagu hagaajiyay gudaha Google Analytics si loogu daro shan warbixinood oo cusub. Warbixinadan waxay "dhalinayaan" waxyaabaha ku saleysan tirada faallooyinka la helay, xiriiriyeyaasha, tixraacyada, tweets, iyo cabbirada kale ee warbaahinta bulshada. Warbixin kastaa waxay siisaa aragti kala duwan oo ku saabsan baahiyahaaga tabinta bulshada / kormeerka ee kala duwan. 1. Warbixinta Guud, oo muujineysa saameynta warbaahinta bulshada ay ku leedahay waxyaabaha ku jira. Warbixintani waxay jajabisaa waxyaabaha "Isdhexgalka ugu Dambeeya" iyo "Wadahadalka Bulshada ee Caawinaya."
Khamiista, Febraayo 25, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Scott Hardigree
Barnaamijka suuqgeynta iimaylka xun ayaa la mid ah qof iibiya wax dhib badan, laakiin dadaal yar iyo shaqsiyeyn badan waxaad u rogi kartaa emaylka iibiyahaaga wax soo saaraha ugu sareeya. Waxa ugufiican dhamaan, waa wax fudud oo aan qaali ahayn in la sameeyo.